MAGAALADA BURCO OO SI WEYN LOOGA XUSAY 27-KA MAY OO AH MAALINTII GUDAGALKA MUJAAHIDIINTII SNM 1988 | WWW.SOMALILAND.NO
MAGAALADA BURCO OO SI WEYN LOOGA XUSAY 27-KA MAY OO AH MAALINTII GUDAGALKA MUJAAHIDIINTII SNM 1988
Posted on Maajo 27, 2008 by weriye1
Burco(sl.no) 27,may 2008 – Fagaaraha Khayriyada magaalada Burco ayaa maanta lagu qabtay munaasibad lagu xusayo sanadguuradii labaatanaad ee ka soo wareegtay gudagalkii ciidamada SNM,ee Burco,oo ku beegan 27Mey.
Mujaahid Faysal Xabaal mariwaa, oo ka mid ahaa mujaahidiintii SNM ee 27Mey soo gashay Burco ayaa faahfaahiyay siday ku soo galeen ciidanka SNM,tirada ay ahaayeen gaadiidka ay wateen iyo goobaha ay ka soo dhaqaaqeen waxaanu yidhi “ Waxaanu ka soo dhaqaaqnay Magaalada Samatar Axmed galabnimadii 26Mey,waxaanu ahay sadex guuto oo lugta iyo guuto tikniko ah,isugayntooduna tahay 812mujaahid oo 14 haween ahaayeen,waxaanu wadanay 12gaadhi oo tikniko ah iyo gaadiid badan oo shicib ah.
Waxa uu raaciyay intaa in guutooyinkaas ay kala wateen Tawakal Muj.Axmed Macalin Haaruun,Alla-aamin, Muj.Xandule,Sadexaad Muj.Ibraahin ha liqin,Guutada tiknada,Muj.C/llaahi Dakhare,(Alle-Haw naxariisto Dhamaantood),Taliyaha guud ee ciidanku waxa uu ahaa Muj.Axmed Mire.Abaanduuluhu Aadan Saleebaan,Hawlgalintu Xuseen Kharash yare.
Abwaan Maxamed Ibraahin Warsame(Hadraawi), oo isaguna ka mid ahaa Mujaahidiintii SNM, ee Burco soo gashay oo ka hadlay Xuskaa 27Mey,ayaa sheegay in Maanta ay tahay Maalintii Maalmaha,Waxa uu inta raaciyay in ilaa xiligii gumaysigu dalkan yimi ay ummadu dagaal uun ku jirtay,marba heer marayay,haseyeeshee ugu dambayntii ay gashay dagaalkii yimi,oo la huray naf iyo maalba si ay u difaacdaan Karaamadooda iyo Milgahooda.
Muj.Dr.C/qaadir Aw-Muuse Muruqliqe, oo ahaa dhaktarkii ugu horeeyay ee SNM ku biira ayaa munaasibadaa ka sheegay in guushii SNM,ay iska lahaayeen shacbigu,waxaanan maalintaa hubaa in Maansadii Hadraawi ee Daalalay ay rumowday.
Muj.Maxamed Kaahin, haddaan maalintaa go,aankaa adag ee lagu shahiiday aan la qaadan maanta halkan maynu fadhineen,jabhadii SSDF,waxay baaba,aday Maalintaas,Waayo may haysan Ragii SNM,oo kale,Sidaas darteed waxa loo baahan yahay in ummadu ilashato Taariikhdeeda,oo aanay ka lumin.
Muj.Ibraahin Dhega weyne, Waxay ahayd maalin dawladii aynu martida u ahayn ee itoobiya ay heshiiyeen Siyaad Bare,waxay 27Mey ahayd maalintii u horeysay ciidankii SNM ay si geesino leh u soo galeen Burco,Anigoo waxaan ahaa ciidankii Dhinaca Hargaysa soo galay waxaanu ka dambaynay afar cisho.Ilaahay ayaa guusha ina siiyay,haseyeeshee waxay ahayd inaynu dhamaystirano.
Prof.C/salaan Yaasiin, Waxa ilaahay inoo fasaxy in hadii layna dulmo aynu ka dagaalano,waa inaynu ilaahay ugu mahadnaqnaa guushii uu ina siiyay.Waxa uu intaa ku daray in ay fududahay in wax la dumiyo,balse ay adag tahay in wax la dhiso,waxa loo baahan yahay oo bulshada laga doonayaa inaynu gacmaha isqabsano oo inagoo wadajira ka shaqeyno horumarinta dalkeena “Ogaada dawladu waa idinka(Bulshada)”.
Muj.Cali Hayaan, ayaa isaguna sheegay inay maalintaa qaateen go,aan adag,oo ah Geeri iyo guul,waxaanu ku xisaabtamaynay Saadka cadowgu haysto,waxaase gacanta ugu weyn ka helnay dadweynaha,Waayo Xooga aanu tirsanaynay ayay ahaayeen,Sidaas darteed ilaahay waa nagu guuleeyay,balse ha la ogaado Taariikhda,oo la barto maalmaha qiimaha weyn inagu leh.
Muj.Xaliimo Axmed Faarax, oo ka mid ahayd haweenkuu mujaahidiinta ahayd ee la socday Ciidankii soo galay Burco 27mey,oo munaasibadaa ka hadshay ayaa tilmaantay inay 14haween ah kula socdeen ciidanka,islamrkaana ay ka dhinteen laba dumar ahi balse ay intoodii kale nool yihiin “Waxaanu doonaynay inaanu wadankayaga ka xoreyno cadowgii waxaanu go,aansanay inaanu shahiidno”.
Kayse Ahmed Digaale, Burco
« DUGSIGII SARE EE ALLAYBADAY OO LA DHAMAYSTIRAY TACSI TIIRAANYO LEH »